नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट, चन्द्रागिरिको शेयरमा सकारात्मक सर्किट - Khabar Break
बिहीबार नेप्से सूचक २१ दशमलव २९ अंकले घटेर २५४८ दशमलव ९६ विन्दुमा आएर अडिएको छ । केही दिन यता नेप्सेले बढ्ने लय समाए अनुसार नै लगानीकर्ताहरुमा समेत उत्साह देखिएको छ ।
समग्रमा बिहीबारको कारोवारमा अल्पकालिन लगानीकर्ताहरुको नाफाबुक गर्ने होडले बजारलाई केही मात्रामा प्रभावित गरेको छ । यसैका कारण नेप्से सूचक बुधबारका तुलनामा केही तल झरे पनि कारोबारको मात्रा भने राम्रै देखिएको छ ।
कारोवार रकमको मात्रामा देखिएको सकारात्मकताले बजारमा क्रेता र बिक्रेताहरुको अभाव नरहेको संकेत गरेको छ । बिहिबार शेयर बजारमा ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ । कारोवारमा २ सय ८ कम्पनीको १ करोड २३ लाख ७६ हजार भन्दा बढी कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएका छन् ।
विभिन्न ३ समूहको सूचकमा हरियाली देखिएको छ ।नेप्सेका अनुसार, आज सबैभन्दा बढी चन्द्रागिरि हिल्सका लगानीकर्ताले कमाए । सो कम्पनीको शेयरमा आज पनि १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा सकारात्मक सर्किट लाग्यो । ३ कम्पनीकै भाउ सर्किट लाग्ने गरी वृद्धि भएको छ । ८९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीसहित खरिदबिक्रीमा निफ्राको अग्रगामी यात्रा कायमै रहेको छ ।
बढ्यो सुनको मुल्य, कति छ तोलाको ?
हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र ७० प्रतिशत क्षमतामा मात्र सञ्चालन
ह्वातै बढ्यो सुनको मुल्य, कति छ तोलामा ?
बिहिबार नेप्सेमा दोहोरो अंकको गिरावट
नेप्से पाँच अंकले घट्यो
घट्यो सुनको मुल्य, तोलामा कति पुग्यो भाउ ?
आज पनि बढ्यो सुनको मुल्य, तोलामा कति पुग्यो ?
साताको पहिलो दिन नेप्सेमा ७ अर्बभन्दा बढीको कारोबार